Pasi Rose Romirira Kuwanikwa kweMushonga Unodzivirira Covid-19
Kambani yeModerna iri mudunhu reMassachussetts muAmerica inoti iri kufadzwa nezvairi kuwana kubva mumushonga wairi kuedza kugadzira ungangodzivirira Covid-19.
Vanhu vanodarika mamiriyoni mana nemazana mapfumbamwe ezviuru vanonzi vabatwa nechirwere cheCovid-19 mupasi rose, uye vanodarika mazana matatu nemakumi maviri nenhatu ezviuru pasi rose varasikirwa nehupenyu hwavo nekuda kwechirwere ichi.
Nekuda kwedambudziko rabata pasi rose iri, vakawanda vari kushuvira kuti dai pawanikwa mushonga unogona kupomhodza chirwere ichi, kana kutochimisa zvachose.
Asi dzimwe nyanzvi mune zvehutano hadzioni dambudziko rechirwere ichi richikasika kupera nekuti hadzioni pachiwanikwa nekukasika mushonga wenhomba kana kuti vaccine, unokwanisa kudzivirira kutapuriranwa pamwe nekupararira kwechirwere ichi.
Imwe nyanzvi mune zvehutano vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Doctor Frenk Guni, vanoti zvinogona kuita kuti pawanikwe mushonga wekudzivirira kupararira kwechirwere ichi, asi zvinogona kutora nguva iri pakati pegore nechidimbu kusvika kumakore maviri kana kutodarika kuti pazowanikwe mushonga uyu.
Asi Doctor Guni, avo vanozve nhengo yeZanu PF, vanoti pane zvimwe zviri kuitwa pari zvino nemakambani, zvipatara zvepamusoro pamwe nezvikoro zvepamusoro zvakasiyasiyana, avo vari kugadzira mishonga yavari kuedza kuona kuti inokwanisa here kurapa vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi.
Doctor Guni vanoti pamakambani emuAmerica akazivisa kuti ari kutsvaga mushonga wekudzivirira chirwere ichi, kambani yeModerna iri kuMassachussetts yakatozivisa kuti zvairi kuwana kubva muongororo yemushonga wayo zvinopa vimbiso yekuti mushonga wairi kugadzira unogona kushanda pavanhu.
Kambani iyi, iyo yakatsigirwa nehurumende yeAmerica nemari inodarika mazana mana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora mwedzi wapera, yakakwira masheya ayo zvakanyanyisa neMuvhuro, apo sheya rimwe chete raiita madhora makumi masere.
Asi huremu hwemasheya ayo hwakazodzika neChipiri neChitatu mushure mekunge kambani yemagweta yeSchall Law Firm, yakazivisa kuti iri kuongorora kambani yeModerna yakamirira vanhu vakaisa hupfumi hwavo mukambani iyi sezvo Schall Law Firm ichiti pane kutyorwa kwemitemo kwakaitwa nekambani yeModerna.
Kunyange hazvo paine matanho ari kurongwa nekambani yemagweta iyi, kambani yeModerna yakatozivisa kuti ichatengesa masheya anokosha bhiriyoni imwe chete nemazana matatu ezviuru zvemadhora kuitira kuti iwane mari inodiwa mukutsvakiridza kushanda kwakasimba kwemushonda inodzivirira Covid-19.